एक किलो तरकारीको मूल्य डेढ लाख रुपैयाँ ! यी युवा किसानले कस्तो तरकारी फलाए ? – ramechhapkhabar.com
एक किलो तरकारीको मूल्य डेढ लाख रुपैयाँ ! यी युवा किसानले कस्तो तरकारी फलाए ?
काठमाडौं। एक किलो तरकारीको मूल्य डेढ लाख रुपैयाँ पर्छ भन्दा हामीलाई अचम्म लाग्छ । तर, यो साँचो हो । एक युवा किसानले यस्तो तरकारी फलाएका छन् जसको एक किलोकै मूल्य डेढ लाख रुपैयाँ पर्छ । यो तरकारी र तरकारी फलाउने युवा किसान विगत केही दिनदेखि चर्चामा छन् । यो तरकारीको नाम होप शुट्स हो । यो तरकारीको खेती गर्ने किसान भारतको बिहार राज्यको औरंगाबादका अमरेश सिंह हुन् ।
बिहारको औरंगाबाद जिल्लाका किसान अपरेश सिंहले आफ्नो खेतमा विश्वकै महंगो तरकारी होप शुट्सको खेती गरेका छन् । होप शुट्सको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा १ हजार युरो (करिब डेढ लाख रुपैयाँ) पर्ने द गार्डियनको एक रिपोर्टमा जनाइएको छ । भारतीय बजारमा यो उत्पादन निकै दुर्लभ छ र यो विशेष अर्डर दिएर मात्रै विदेशबाट मगाइन्छ । अमरेशले आफूले लगाएका बिरुवामध्ये ६० प्रतिशत बिरुवा सफलतापूर्वक हुर्किरहेको बताए ।
यो खेतीको वाराणासीमा रहेको इण्डियन भेजिटेबल रिसर्च इन्स्टिच्युटका वैज्ञानिक डा. लालले निरीक्षण गर्ने भएका छन् । द न्यू इण्डियन एक्सप्रेसका अनुसार अमरेशले यी बिरुवा इण्डियन भेजिटेबल रिसर्च इन्स्टिच्युटबाटै ल्याएर २ महिना अगाडि लगाएका हुन् । अमरेशले यसको उपयोगिताबारे कुरा गर्दै यसको प्रयोग बियरलगायत पेय पदार्थ बनाउन र एन्टिबायोटिक्स औषधि बनाउन गरिने बताए । यसबाट बनेको औषधि क्षयरोगको उपचारमा पनि लाभदायक पाइएको उनले बताए ।